Wararka - Aqoon yar oo ku saabsan wax soo saarka saxaafadda kulul iyo cadaadiska isostatic kulul
Mashiinka saxaafadda kuleylka ee Combo
Mashiinka saxaafadda kuleylka
Aqoon yar oo ku saabsan sheyga saxaafadda kulul iyo cadaadiska isostatic kulul
Cadaadiska kulul, isku xigxiga xakamaynta cadaadiska iyo heerkulka ayaa loo isticmaalaa. Marar badan, cadaadiska ayaa la adeegsadaa ka dib markii xoogaa kuleyl ah ay dhacday maxaa yeelay kuleylka cadaadiska heerkulka hoose wuxuu ku yeelan karaa saameyn xun qaybta iyo qalabka. Heerkulka cadaadiska kulul wuxuu ka hooseeyaa boqollaal digrii heerkulka caadiga ah ee sintering. Isugeyn ku dhowaad dhammaystiran ayaa si dhakhso leh u dhacda. Xawaaraha hawsha iyo waliba heerkulka hoose ee loo baahan yahay ayaa si dabiici ah u xaddidaya xaddiga koritaanka miraha.
Qaab la xiriira, firidhidda plasma (SPS), ayaa bixisa beddel ka duwan qaababka diidmada diidmada iyo qaababka kululaynta. SPS, muunad, sida caadiga ah budo ama qayb cagaar ah oo la isku dubbariday, ayaa lagu dhejiyaa garaafka dhinta oo leh garaac garaac leh oo ku jira qolka faaruqinta iyo qulqulka DC ee qulqulaya ayaa lagu dabaqayaa feeraha, sida ku cad Jaantuska 5.35b, halka cadaadiska la adeegsanayo. Waqtiga xaadirka ah wuxuu keenaa kuleylka Joule, oo kor u qaada heerkulka tijaabada si deg deg ah. Xilliga hadda la joogo ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inuu kicin karo sameynta plasma ama dheecaan dhimbiil oo ku dhaca booska u dhexeeya qaybaha, kaas oo leh saameynta nadiifinta dusha walxaha iyo kor u qaadista sinjiga. Samaynta plasma-ka way adagtahay in si xaqiiqo ah loo xaqiijiyo waana mowduuc laga doodayo. Habka SPS waxaa loo muujiyey inuu yahay mid waxtar badan u leh cufnaanta qalabka kala duwan, oo ay ku jiraan biraha iyo dhoobada. Dheef-shiid kiimikaadku wuxuu ku dhacaa heerkul hoose waxaana loo dhammeeyaa si ka dhakhso badan hababka kale, taasoo had iyo jeer keenta microstructures hadhuudh fiican.
Cadaadiska Istiraatiijiyadda Kulul (HIP). Cadaadiska istiraatiijiga ah ee kulul waa codsi isku mid ah oo kuleyl ah iyo cadaadis biyo-shubis ah si loo xoojiyo loona adkeeyo isugeynta budada ama qayb. Nidaamku wuxuu la mid yahay cadaadiska isostatic qabow, laakiin leh heerkul sarreeya iyo gaas gudbinaya cadaadiska qaybta. Gaasaska aan firfircooneyn sida argon waa wax caadi ah. Budada ayaa ku cufan weel ama qasacad, taas oo u shaqeysa sidii carqalad deform ah oo udhaxeysa gaaska la cadaadiyay iyo qeybta. Haddii kale, qayb la soo koobay oo loo qoondeeyay illaa iyo inta lagu xidhayo godka ayaa lagu HIPed karaa hanaan “aan weel lahayn”. HIP waxaa loo isticmaalaa in lagu gaaro cufnaanta buuxda ee metallurgy budada. iyo dhoobada dhoobada, iyo sidoo kale codsi qaar ka mid ah cufnaanta jilayaasha. Qaabku wuxuu si gaar ah muhiim ugu yahay adkaanta in la ciriiriyo qalabka, sida aaladaha diidmada, superalloys, iyo dhoobada nonoxide.
Tiknoolajiyadda konteenaarka iyo xirmidda ayaa muhiim u ah habka HIP. Weelasha fudud, sida gasacadaha birta ah, ayaa loo isticmaalaa in lagu cabiro billets-ka budada iskujira. Qaabab isku dhafan ayaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo weel muraayad u ah joomatari ahaan qaybta ugu dambeysa. Maaddada weelka ayaa loo doortaa inay daadato oo jilicdo iyadoo la raacayo xaaladaha cadaadiska iyo heerkulka ee habka HIP. Qalabka konteenarradu sidoo kale waa inay noqdaan kuwo aan firfircooneyn budada oo ay fududahay in la soo saaro. Wixii metallurgy budada ah, weelasha ka samaysan go'yaal biraha waa caadi. Ikhtiyaarrada kale waxaa ka mid ah dhalooyinka iyo dhoobada dhoobada leh oo ku duugan qasacad bir labaad ah. Soo koobida muraayadda budada iyo qaybaha horay loo sameeyay waxay caan ku tahay geedi socodka HIP dhoobada. Buuxinta iyo daadgureynta weelka waa talaabo muhiim ah oo inta badan ubaahan qalab gaar ah oo weelka laftiisa. Hawlaha daadgureynta qaarkood waxay ku dhacaan heerkul sarreeya.
Qaybaha muhiimka ah ee nidaamka HIP waa markabka cadaadiska leh kululeeyayaasha, cadaadiska gaaska iyo qalabka dhiibida, iyo xakameynta elektaroniga. Jaantuska 5.36 wuxuu muujinayaa tusaale ahaan qaab-dhismeedka HIP-dejinta. Waxaa jira laba qaab oo aasaasi ah oo hawlgal loogu talagalay habka HIP. Qaabka kuleylka kuleylka, weelka waxaa lagu kululeeyaa meel ka baxsan markabka cadaadiska ka dibna waa la raraa, laguna kululeeyaa heerkulka loo baahan yahay waana la cadaadiyaa. Habka rar qabow, weelka waxaa la dhigayaa weelka cadaadiska heerkulka qolka; markaa wareegga kululaynta iyo cadaadiska ayaa bilaabmaya. Cadaadiska u dhexeeya 20-300 MPa iyo heerkulka u dhexeeya 500-2000 ° C waa wax caadi ah.
Cinwaanka:MAYA. 18 ee Shengda Street, Chengxi Warshadaha, Magaalada Yiwu. Gobolka Zhejiang, Shiinaha.